Ogaden News Agency (ONA) – Kacdoono Cusub oo Kabilowday Dhulka Canfarta & Dad Laxidhxidhay.
Kacdoono Cusub oo Kabilowday Dhulka Canfarta & Dad Laxidhxidhay.
Posted by Dulmane	/ June 2, 2018
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Canfarta ee gacanta Gumaysiga kujira ayaa sheegaya in ay kacdoonadii shacabku gaadheen meel sare, waxaana lasheegayaa in ay todobaadkan aad usoo xoogaysteen kacdoon wadayaasha Canfartu.
Sida xogta aan kuhelayno waxay kacdoono waawayn kadhaceen Gobolka Cusbada hodanka ku ah ee Afdera ee dhulka Canfarta, kaas oo sida lasheegay mudo 27 sano ah ay maamulayeen saraakiil khaas ah oo Tigree ah, kuwaas oo khayraadka Gobolka la mulki siiyay.
Warka ayaa intaas kudaraya in dadkii shacabka ahaa ee dhulka lahaa ay go’aan sadeen in ay dulmiga dhulkooda kajira iska dulqaadaan isla markaana ay xaqooda mudada kamaqnaa soo ceshadaa, waxaana lasheegayaa in ay shacabka Canfartu wadaan dadaal aad uxoogan.
Dhinaca kale waxaa xabsiyada laga buuxiyay dad shacab ah oo aad ubadan kuwaas oo sida lasheegay loogaystay jidh-dil aad ubadan, waxaana lasheegayaa in hanti badan ay ciidanka wayaanuhu boobeen.
Mid kamid ah qaban qaabiye yaasha kacdoonka dhulka Canfarta oo warbaahinta madaxa banaan lahadlay ayaa sheegay in ay kacdoonka wadayaan ilaa iyo inta ay xaqooda kahelayaan, sidoo kale shakhsigan oo magiciisa qariyay ayaa sheegay in hogaanka sare ee wayaanuhu uu gacan bidixeeyay Gobolka Canfarta.
Dadka shacabka ah ee kudhaqan Gobolka Canfarta ayaa kamid ah shucuubtii ay kooxda TPLF aad ubahdishay, waxaana dadka Canfarta ah loola dhaqmay sida dadka Soomaalida Ogaadeeniya loola dhaqmo.
Isku soo wada duub oo dadka shacabka ah ee kudhaqan wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa gaadhay heer ay cabashadooda muujin karaan, waxayna taasu kadambaysay kadib markii shacabkii Oromada ee kacdoomay ay afka dhulka udareen xukuumadii hore ee wayaanaha.